Aden Ducaale iyo xildhibaanno kale oo Soomaali ah oo lagu eedeeyay in ay haystaan laba baasaboor - BBC News Somali
Image caption Aden Barre Ducaale oo laga soo doorto Garisa, waa hoggaamiyaha Aqlabniyadda Baarlamaanka Kenya
Ducaale wuxuu sheegay in ay shirqool u dhigayaan dad uu ku tilmaamay "kuwo iska dhigaya in ay shaqo hayaan, dadka kalena ku mashquulsan".
Guddiga wuxuu xalay sheegay in uu hubinayo xildhibaannadaas qaar ka mid ah haddii ay baasaboor kale haystaan "taas oo ka soo horjeeda sharciga".
Wuxuu bartiisa Twitter-ka ku qoray: "Waa arrin dadku ay wada og yihiin in aan ku faanayo dhalashada Kenya, mana haysto dhalasho labaad, weligeyna ma qaadan sharciga dal kale, mana qaadan doono weligeyna. Waxaan dhiigga ka ahayn Kenyan, weligeyna waan ku waarayaan Kenyan-nimada".
Dastuurka Kenya ayaan ogoleyn in qof laba dhalasho haysta uusan marna qaban Karin xil dowladeed, iyadoo arrintaas loo sababeynayo "sida uu qofka daacad ugu noqon karo laba waddan".
Ducaale wuxuu sheegay in kuwa shirqoolaya ay arrintaas ku dhalisay ka dib markii uu diiday in "uu fududeeyo in Mwinzi loo ansixiyo xilkii safiirka ee South Korea".
Ducaale wuxuu ku doodayaa in dhowr qof ay soo weceen kana dalbadeen in uu "caawiyi Mwizi," balse uu ku adkeystay "u hoggaansamidda shuruudaha uu xiray dastuurka".
Xildhibaankan laga soo doortay Garisa, wuxuu horey u sheegay in "uu yahay Soomaali ah muwaadin Kenyan", mar uu ka hadlayay khilaafka xuduudda badda ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeya.